Umaka: bika | Martech Zone
Udinga Ukumakethwa Kokusizwa Kuzethameli Zobuchwepheshe? Qala Lapha
NgeSonto, ngoFebhuwari 7, 2021 NgeSonto, ngoFebhuwari 7, 2021 Wendy Covey
Ubunjiniyela akuyona umsebenzi njengoba kuyindlela yokubuka umhlaba. Kubakhangisi, ukubheka lo mbono lapho ukhuluma nezethameli zobuchwepheshe obuqonda kakhulu kungaba umehluko phakathi kokuthathwa ngokungathi sína nokunganakwa. Ososayensi nonjiniyela bangaba yizithameli ezinzima ukuqhekeka, nokuyinto edala isimo se-State of Marketing to Engineers Report. Ngonyaka wesine zilandelana, iTREW Marketing, egxile kuphela ekukhangiseni kubuchwepheshe
NgoLwesibili, Okthoba 16, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Sekuyiminyaka engaphezu kweyishumi, ukugxila ekubonisaneni kwami ​​embonini yethu kusize amabhizinisi ukuba adabule futhi aguqule izinkampani zawo ngamadijithi. Yize lokhu kuvame ukucatshangwa njengohlobo oluthile lokucindezela phezulu kusuka kubatshalizimali, ibhodi, noma iSikhulu Esiphezulu, ungamangala ukuthola ukuthi ubuholi benkampani abunalo ulwazi nekhono lokucindezela uguquko lwedijithali. Ngivame ukuqashwa ubuholi ukusiza inkampani iguqulwe ngokwamadijithi -
Umbiko we-SoDA ka-2013: I-Digital Marketing Outlook
ISonto, May 5, 2013 NgoMgqibelo, ngoMeyi 4, 2013 Douglas Karr
IGlobal Society for Digital Marketing Innovators ikhiphe umbiko wayo wezi-2013 ekuqaleni konyaka. Kunokutholakele okubalulekile ngaphakathi kombiko kuzindlela zombili zokukhangisa zedijithali kanye nezinguquko endleleni izinkampani ezisebenzisa ngayo ama-ejensi wokukhangisa edijithali. Ukuthola Okusemqoka Abangaphezu kwesigamu sabo bonke abaphendulile bathe bakhuphula izabelomali zabo zokumaketha ezidijithali, nokuningi kokushintshwa kusuka ekushintsheni kwesabelomali esivele sikhona kuya kwidijithali. Bangu-16% kuphela abandisa imali abayichithile yokukhangisa.
Ukuguqula Idatha Enkulu ibe Ukuqondisisa Okungenzeka
NgoLwesine, Januwari 17, 2013 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
U-2013 kungaba unyaka we-Big Data… uzobona izingxoxo eziningi lapha Martech Zone kumathuluzi okuthola, ukuphatha nokusebenzisa imiqulu emikhulu kakhulu yedatha. Namuhla, uNeolane kanye neDirect Marketing Association (DMA) bakhiphe umbiko wamahhala osihloko sithi, Big Data: Impact on Marketing Organisations. Imiphumela esemqoka kulo mbiko yabiwe ngale infographic. Umbiko uthola ukuthi iminyango eminingi yezokumaketha ayinazo izinsiza zokubhekana nokukhula